တောင်းဆိုချက်များကို အလုပ်ရှင်နှင့် သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်သဖြင့် ပဲခူး ဟွာရှိန်အထည် - Yangon Media Group
တောင်းဆိုချက် ပေါင်း ၃ဝ ခုဖြင့် ဆန္ဒထုတ်ဖော် ခဲ့သည့် ပဲခူးရှိ ဟွာရှိန်အထည်ချုပ် စက်ရုံမှလုပ်သား ၃ဝဝဝ ကျော်၏ တောင်းဆိုမှုကို အလုပ်ရှင်အလုပ် သမားသဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်သဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဝင်မည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ပဲခူးရှိ ဟွာရှိန်အထည်ချုပ် စက်ရုံမှ လုပ်သား ၃ဝဝဝ ကျော် တောင်းဆိုချက် ပေါင်း ၃ဝ ချက် ဖြင့် မတ်လ၂၂ ရက်၊ ၂၃ ရက်နေ့ တွင် လုပ်ငန်းခွင်ရပ်ဆိုင်း၍ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယင်းစက်ရုံ လုပ်သားများမှ ခွင့်ဖြင့်အလုပ်တစ်ရက်ပျက်ပါက လုပ်ခ နှစ်ရက်စာဖြတ်တောက်နေသဖြင့် ယင်းမှအစပြု၍ ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုရခြင်းဖြစ်သလို မေ ၂၃ ရက်နေ့တွင် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန် ဖြေရေးအဖွဲ့တို့ဖြင့် ညှိနှိုင်းမှုဖြင့် တောင်းဆိုချက်ပေါင်း ၃ဝ အနက် ၂၉ ချက်ကို နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းသ ဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီး ပြေလည် ကြောင်း စာချုပ်ချုပ်ဆို၍ မေ ၂၄ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမားများ လုပ်ငန်းခွင် ပြန်လည်ဝင်ရောက် မည်ဖြစ်ကြောင်း ယင်းအလုပ်သ မားအရေးကို ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင် ရာအလုပ်သမား သမဂ္ဂများအဖွဲ့ ချုပ် CTUM မှ ကိုဝင်းဇော်က ပြောသည်။
”ဒီနေ့ ညှိနှိုင်းတယ် လက်ရှိအခြေအနေကတော့ တောင်းဆိုချက် အချက် ၃ဝ ကို ၂၉ ချက်ညှိ လို့အဆင်ပြေတယ်။ တစ်ချက်က တော့ ရေရှည်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် ရမယ့်အချက်ဖြစ်တယ်။ အဆင်ပြေတဲ့အချက်တွေကတော့ ဥပဒေပါ အတိုင်းအလုပ်သမားတွေကို ပေး ရမယ့်အချက်တွေဖြစ်တယ်။ ဒီနေ့ အလုပ်ရှင်အလုပ်သမား သဘောတူညီကြောင်းစာချုပ်ချုပ်ပြီးတာနဲ့ မနက်ဖြန်အလုပ်သမားတွေ ပုံမှန် အတိုင်းအလုပ်ပြန်ဝင်မှာ ဖြစ်ပါ တယ်”ဟု ကိုဝင်းဇော်က မေ ၂၃ ရက်တွင် ပြောသည်။
အလုပ်သမားများ၏ တောင်းဆို ချက်များတွင်လည်း စက်ရုံတွင်း သောက်သုံးရေအတွက် ရေသန့် စက်များတပ်ဆင်ပေးရေး၊ အလုပ်ဆင်းရက်မှန်ကြေး တစ်လလျှင် ကျပ်သုံးသောင်းပေးရန်၊ ကျန်းမာ ရေးမကောင်းသည့် လုပ်သားများ ဆေးမှတ်တမ်းစာရွက်တင်ပြပါက ခွင့်အဖြစ်ပေးရန်၊ အလုပ်နားချိန် တွင် အလုပ်ခိုင်းစေချင်းမပြုလုပ် ရန်၊ မိဘအရင်းသေဆုံးပါက ရက် လည်အထိခွင့်ပေးရန်၊ အထည်ချုပ် စံချိန်မတရားတောင်းခံခြင်းမပြုရန်၊ ဖယ်ရီကားမပေးသည့် နေရာများ ကို ဖယ်ရီစီစဉ်ပေးရန် စသည့် အချက်များအပါအဝင် လုပ်ငန်းခွင် အခွင့်အရေးအချက်ပေါင်း ၃ဝ ချက်ကို တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”အလုပ်တစ်ရက်ပျက်ရင်၊ တစ်ရက်စာပဲလုပ်ခဖြတ်ပေါ့၊ သူ တို့ကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ နှစ်ရက်စာ ဖြတ်နေတယ်။ တကယ်ဆို ဆေး ခွင့်စာရွက်စာတမ်းတင်ပြနိုင်ရင် ခွင့်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးရမှာကို အဲ့ဒီလိုတွေလုပ်နေတာ၊ ဒါကြောင့် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုရတာပါ” ဟု ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေသည့် ယင်း စက်ရုံမှအထည်ချုပ်လုပ်သား တစ်ဦးဖြစ်သူ မထိန်ထိန်လင်းက ဆိုထားသည်။ အဆိုပါစက်ရုံသည် စက်ရုံ လုပ်သား ဦးရေ ၄ဝဝဝ ခန့်ဖြင့် လုပ်ကိုင်နေသည့် စက်ရုံဖြစ်ပြီး၊ စက်ရုံတွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် အလုပ် သမားတောင်းဆိုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စက်ရုံဘက်သို့ ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ် သော်လည်း ဖုန်းကိုင်ဖြေကြားခြင်း မရှိပေ။
ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီး အမှု အာမခံ မလျှောက်တော့ဘဲ အမှုအမြန်ဆုံး ပြီးပြတ်အောင် ဆောင်ရွက်??
တရုတ်၏ တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှု တားဆီးထိန်းချုပ်ရေး စီမံချက်ကြောင့် မူဆယ်နယ်စပ်တွင် ဆန်၊ ပြောင??
ရိုးရာခြင်းလုံး အားကစားသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုယ်ပိုင် ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာက သိစေရန် ဆောင??
နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများ အဘက်ဘက်မှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး လူတန်းစေ့နေနိုင်ရန် လမ်း၊ တံတားမျ?